Muta Ugboelu Nlere Anya na Njikwa Redio - Ikkaro
Njikwa redio na ụgbọ elu ihe atụ
Ofwa nke ụgbọ elu ihe atụ na njikwa redio. Kemgbe ụwa m, m nwere mmasị na ụwa nke a nke m chọrọ iweghachi.
Lelee usoro iji mepụta onwe gị nke redio na-achịkwa.
Ngalaba ahụ enweghi oge, anyị kwesịrị ịga n'ihu na-ekwu maka helikopta, drones, na ụdị ngwaọrụ niile anyị nwere ike iji wulite na-ewu ihe, ihe ole na ole na ọtụtụ echiche na ihe ọmụma.
Ngalaba na ntuziaka ga-abụ mmalite maka ụwa a na-akpali akpali, ihe omume ntụrụndụ ma ọ bụ ihe riri ahụ, ihe ọ bụla ịchọrọ ịkpọ ya.
Anyị na-egosipụta Hovercrafts ma ọ bụ hovercraft
Echela na ọ bụ ihe dị mfe, mana usoro ọ bụla ga-enyere gị aka.
Gbọ ala Cirin RC nke ejiri eriri roba
Na mberede, ị hụ ha, ị ga-enwekwa mmasị n’ọdịdị ha. N'ihi na ọ mara mma, mara ezigbo mma na mgbe ịmalitere ileba anya wee hụ ihe ọ nwere ike, naanị ị chọrọ inwe otu, mee otu ahụ.
Aha ya bụ Cirin, ọ bụ a ụgbọ ala redio na-achịkwa nke ejiri eriri roba. enweghị batrị, ọ ka mma ịsị na ọ bụ ike na-agbanwe, mana n'eziokwu, ọ bụ eriri roba 4,5 mita.
Ngwa “engine” a anaghị adị anyị ezigbo ụtọ. Mana Cirin nwere ike iru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50 km / h na ọsọ ọsọ ma nwee ike ịga njem na 150 mita, ọ bụghị nnwere onwe dị ukwuu, kama ọ bụ karịa ihe m tụrụ anya maka mpempe roba. Ihe masịrị m bụ ọsọ ọsọ, dị egwu.
Site n'ike mmụọ nsọ imewe ka ọ na-ekwu Max greenberg, otu n’ime ndị kere ya, n’afọ ndị 1950 nke ụgbọala na-agba agba nakwa n’ọkpụkpụ nnụnụ.
Okwu mmalite nke helikopta eletrik
M ga-amalite usoro nke posts raara nye eletriki RC helikopta.
Dị ka nlereanya ụgbọeluSite na ọganihu na teknụzụ na China na-eme ka ọ dị ọnụ ala ma dị ọnụ ala, ndị helikọpta RC dị ọnụ ọnụ. (Ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, dịka ọ dị n'ụgbọelu, anyị agaghịzi ada mbà ma ọ bụrụ na anyị mebie ya)
Otutu nke usoro a ga-abụ nzukọ nke helikopta dị ọkara, (70 cm rotor diamita), nke m ga-egosi site na nkwụsị. Ihe kpatara nhọrọ a dị iche iche, na nke bụ isi, ọnụahịa, ebe ọ bụ na ngwa chassis egosipụtara na foto ahụ ruru naanị 8 euro.
Aircraftgbọ elu ụgbọ elu, ụlọ IKKARO 002, okwu mmalite.
Anyị ga-amalite iwu ụlọ ọrụ eletrik ọzọ, Ikkaro 002.
N'ikwekọ na mmụọ nke blog a, aga m eji ihe karịrị ihe eji eme ihe, kaadiboodu, site na nkwakọ ngwaahịa nke Ikea na osisi na ọkara nke mop, (aluminom).
Ọdịdị dị ugbu a nke spawn bụ ndị a,
con mbụ prototype na anyị mere, ụgbọ elu ahụ dịkarịrị ala ma ọ bụ na-erughị ala, n'ihi ntakịrị ịdị arọ nke ihe ndị ahụ, elu nke nku ya na moto eji eme ihe.
Ana m akwado nkuzi nkuzi helikopta eletrik. Sure hụkwara ya n'anya.
Okwu mmalite nke ụgbọ elu eletrik. Iwuli Ikkaro001
Aga m amalite usoro n'usoro ụgbọ elu eletrik, na-esite na mmụọ nke weebụsaịtị a. Ngwọta akụ na ụba na nnwale, yana usoro ihe kpatara eji eme ha na otu esi arụ ọrụ. M ga-akọwa akụrụngwa elementrị, akụkụ dị iche iche na otu esi eji ihe dị iche iche kwa ụbọchị eme ihe n'ụgbọelu ihe atụ.
Y’oburu na nke gi bu ndi helikopta, a hapuru m nkuzi ozo iji zuo a Okwu mmalite nke helikopta eletrik.
Disassembling a anọ wheel mbanye scalextric ụgbọ ala
Bọchị gara aga anyị kwụsịrị Gbasara echiche nke ụgbọ ala sclextric ma ọ bụ oghere. Dika m kwuru na ebumnuche nke ihu otu esi ewu ha ka ha mee m, jiri igwe elekere 4 na injin abuo.
Ọfọn, na-na ọchụchọ ozi m disassembled m Peugeot 307 WRC de Ihe ọ bụla, ha rere ya ka draịva 4.